Dad badan oo ay leeyihiin aaladaha tufaax dhamaadka sare in ay u isticmaalaan si maalinle ah in la sameeyo tiro balaadhan oo ah hawlaha iyo wax soo saarka. Waxaynu wada ognahay tufaax ka dhigaysa Qalabka telefoonada gacanta tayo sare iyo waxaan oo dhan ku isticmaasho nolol maalmeedkeena xitaa internet-ka, ciyaaro kulan mobile iyo tan ugu muhiimsan oo ay wacaan telefoonka. Maqaalkan waxa aan kala hadli doonaa qaar ka mid ah arrimaha iPhone caadi ah in user a kulmaan yaabo taleefan.
Ku baaqay in si toos ah uga dhaco
Dad badan oo jeer laga yaabaa in aad diyaar u tahay inay hesho ama wac aad u muhiim ah oo ku saabsan soo socda qalab aad iyo sida ugu dhaqsaha badan aad ku saabsan in la sii wado si lama filaan ah aad la kulanto call a hoos jira. Tani waxay noqon kartaa mid aad looga xumaado sida iPhone Ku Dhowaaqay In aad on digniin ah aan. Workaround A arrintan waa in ay aad u billaabeen iPhone oo waa bilowdo shaqo sidii ku habboonayd. Haddii arin taasi ka dibna ku caawin karin keddibna warshad lahaa in la sameeyo qalabka.
Taleefan soo diro laakiinse waad maqli weydeen karaa dhinaca kale
Weligaa ma lagu call a iyo qofka aad la hadasho si lama filaan ah Dhowaaqay? Waa hagaag tani waxay noqon kartaa calaamad u tahay dhibaato xagga yeedhistiinnii caadi ah. Markaa waxa laga lahaa arrin iska cad in qofka lama maqal halka telefoon si ay u go'aansadeen in ay soo afjarto yeedho. Arrintan waxa lagu xalin karaa iyadoo jeestay afhayeenka jiro iyo adigoo riixaya afhayeenka icon ku-screen ilaa aad bilowdo maqalka qofka kale ee yeedho. Tani waxay wax yar trick ka shaqeeya 90% jeer oo dhaliya phone afhayeenka iyo off oo awood u hadii mar kale shaqeeyaan tan iyo markii la kiciyay off.
Wicitaanada ma soo galo
Dad badan oo isticmaala iPhone caban in aanay helin taleefan maalmo iyo xataa mararka qaarkood toddobaad. Tani waa mid caadi ah iyadoo si gaar ah iPhone 5s iPhone. Tani waxaa sababa arrin la codsiyada qaarkood iyo adeegyada socda ee iPhone si aad yeelan doontaa si aad u hubiso oo Apps aad dhawaan ku rakiban iyo isku day in aad u xaliyo dhibka. Haddii aad leedahay 'xabsi breaked' aad iPhone waa mid aad u suurtagal ah in dhibaatadan in ay dhacaan iyo sidoo kale 'breaking xabsi' ceshado aad damaanad.
Phone jarto marka aad isku daydo inaad call a
Haddii aad isku daygooda in ay call a aad iPhone oo si lama filaan ah jarto, markaas waxaa jiri karaa dhibaatooyin aad shidma iPhone iyo ama ka dhisay batteriga. Laftiisa dhibaato Tani waxay soo bandhigi doonaan marka iPhone waxaa burburay hab qaar ka mid ah ama mid kale. Si aad u hagaajin arrintan waa in aad dib iPhone oo isticmaalaya Lugood aad kombuutarka. Haddii ay tani u shaqaysaa waxaad awoodi doontaa in ay wacaan aan iPhone deminta in muddo ah. Haddiise wali ay dhibaatadu ka jirto waxaad u baahan doontaa inaad qaadato iPhone inay ka ganacsada shahaado beddelayo qaybaha ama dibna dib ugu diro Apple haddii aad leedahay damaanad ah.
Ku baaqay in si toos ah la joojiyo marka aad isku dayaan in ay u soo dir
Lahaanshaha iPhone ah in si toos ah Dhowaaqay In aad ku noqon kartaa xanuun qoorta marka la isku dayayo in u yeedhin saaxiibbadaada iyo qoysaska, tusaale ahaan, laakiin kama dhigi kartid call a iyadoo aan loo eegayn inta jeer ee aad wici. Dhibaatada iPhone Tani waa hadiyad ugu badan marka xusuusta iPhone waxaa ka buuxa iyo telefoonka aysan ku shaqeyn karin wacay inaad isku dayaysid in la sameeyo. IPhone wuxuu u baahan doonaa xasuusta waayo, dhammaan noocyada kala duwan ee hawsha. Marka aad lacag la'aan ah ilaa xusuusta reer iPhone ka dibna aad dareemi karo in aad ka dhigi kartaa ku baaqeen in dadka aad jeceshahay iyo saaxiibada mar kale.
Wacay si toos ah ugu jawaabo
Waxaa laga yaabaa inaad la ciyaarto aad iPhone ama xataa daalacanaya internetka iyo 'giraan giraan' tagaa call soo socda, laakiin si aad u la yaab leh iPhone si toos ah ugu jawaabo wicitaan oo taleefan ah oo ay tahay in aad hadalka bilaabin xaataa haddii aan lagaa rabin. Arrintan waa la joogo, waayo, button phone menu waxaa ku xayiran iyo macsarada ahaantiisa iyo aad ayaa sidoo kale loo doortay doorasho ee taleefanka si ay uga jawaabaan wicitaanada la button menu. Si aad u hagaajin arrintan waxaad u baahan doontaa si aad u hesho button menu go'an ama u beddel fursad u ogolaan button menu in ay ka jawaabaan wicitaanada.
Uu ku xayiran iPhone heegan socda
Marka aad hesho call a on qalab aad iyo aad ay ogaadaan in aad wax kala hadasho qofka aad markaas kuu yeedhay ayaa kaliya baxay tirada arrin la qalab aad sidii ay u xayiran inta lagu jiro call soo socda ma aan samayn karo. Hadda waxaad haysataan in ay isku dayaan iyo saari pack battey iPhone in ay awood haddii off. Arrintan waxaa sababa Chine in aynan qalabka gaar ahaan haddii aad leedahay 'xabsi breaked' aad iPhone aad tahay arrintan la kulmi doonaan.
Marka xogta waa telefoonka ma aqbali calls
Your iPhone diido oo laga yaabo taleefan oo dhan marka aad isticmaalayso qorshaha xogta ama macluumaadka mobile xitaa internetka. Phone ayaa taas samayn ma mararkii hore oo kale, laakiin sida ugu dhakhsaha badan marka aad soo gashid hab xogta mobile oo aad ka heli in qalab aad ma aqbasho wax calls sidaas, waa wax cad in habka xogta waa natiijada dhibaatadan. Si loo xaliyo arrinta labada waxaad u tagi kartaa off xogta aad ka dhigi iyo gudbiyaa telefoonada ama guuleysatey iPhone ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan oo ay wacaan aad. Haddii arrinta ay weli taagan yihiin, markaas waxaad u baahan doontaa in ay sameeyaan dib warshad via Lugood ah aad kombuutarka.
Marka in call a screen la shiday oo weli riixay
Dhibaatada kale ee caadiga ah in uu yahay joogo iPhone ugu waa in shaashadaha shiday marka aad haatan ku jira call a. Phone ayaa weli riixay iyo baaqa mararka dhammaan kartaa haddii aad wejigaaga u riixay badhanka icon qaldan. Si taas loo hagaajin waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso in aad shidma sida laga yaabo in aan la shaqayso sidii la rabay. Marka shidma fadhiya ma waxaad yeelan doontaa dhibaatada dambe.
Gaadhay hawada maqlay inta lagu jiro call a
Dhibaato iPhone aad caadi u ah waa u eg yahay maqlay inta lagu jiro wicitaan oo taleefan ah. Waxaad hagaajin kartaa arrintan siyaabo fara badan. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa afhayeenka on iPhone iyo marka mar kale in ay arrinta la xalin ama aad si fudud u bilaabi kartaa telefoonka iyo waa inay sida ugu fiican u hagaajin. Si kastaba ha ahaatee haddii aad weli haysato arrin echoe inta lagu jiro taleefan ka dibna waxaa laga yaabaa in arrimaha kale ee aad iPhone oo aad markaas u baahan doonaa si ay u qabtaan reboot ama dib warshad qalab ah .
Sidee loo nadiifiyaa iPhone 6 Screen
> Resource > iPhone > Inta badan la weydiiyay iPhone yeedhay Dhibaatada, iyo sida loo xaliyo?